Maalinta Biyaha Aduunka oo Caalamka Laga Xusayo Xili Biyo La’aan ka jirto Soomaaliya | Radio Iftin
Maalinta Biyaha Aduunka oo Caalamka Laga Xusayo Xili Biyo La’aan ka jirto Soomaaliya
March 22, Waxaa dunida la xusaa maalinta Biyaha, Biyaha waa nolosha wax walba oo nool sidaa darteed in xuso ahmiyadda, la qiimeeyo oo la sheekeeyo waxtarkooda waa arin dad badan soo jiidatay, tanina waxa ay qeyb ka tahay wacyigalinta dadka iyo ifinta baahida jirta ee biyaha loo qabo .
Soomaaliya iyo Maalinta Biyaha:
Sanadkan waxaa ay maalinta biyaha kusoo aaday xiligii ugu xumaa ee dad badan u dhimanayaan biyo la’aan dalka Soomaaliya.
Deegaanka Saaxo ee gobolka Mudug waxaa si joogta ah uga dhaco dagaalo sababtooda ugu badan ay yihiin biyo yaraan iyo ceel biyood la’isku hayo , waxaa dhibkaas la qabo goobo badan oo ka tirsan Gobolada dhexe iyo Puntland.
Todobaadkan waxaa ay Kismaayo Post.com sii deysay in degmada Buurhakaba ay biyo la’aan ka jirto oo fuustadii Biyaha ay joogto 5 Doolar.
Sidoo kale waxgaradka Faafaxdhuun oo Baardheere ka xigta dhinaca koonfur bari, una jirta 84km ayaa u sheegay Warbahinta inay gureen warihii oo ahaa isha ay dadku biyaha ka heli jireen, haddana ay dadku ka helaan biyaha laba berkadood oo xoogaa ku hareen ayse yihiin qaali oo foostadii lakala siisanayo 200 oo kun una dhiganta lacag $10.
Dhinaca Waqooyiga Soomaaliya, Biyo-la’aan baahsan ayaa saamayn ku yeelatay Nolosha Xoolaha iyo Bulshada ku dhaqan deegaamo ka tirsan gobollada dalka qaarkood, ayaa jirta gobollada Awdal, Saaxil iyo Selal ee Somaliland, iyada oo meelaha qaarkood ay ka dilaacday Abaar ba’an oo dadka xoolo-dhaqatada ah ku kallifay inay ka barakacaan deegaannadooda.
Qaramada Midoobey ayaa u dabaal dagto 22 March sanad walba maalinta biyaha aduunka, waxaa la bilaabay sanadkii 1993.
Xog-heyaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon ayaa dhambaal uu maanta soo saaray ku yiro”Si aanu u daaweyno Caqabado badan oo Biyo ku saabsan, Waa inaan si wada jir ah ugu shaqwynaa sidii aan u dhageysan laheen fikradaha cusub iyo in aan wadaagno xalka si aan u helno Mustaqbalk fiican”.
Maxaa la gudboon dadka:
ilaali biyaha: inta biyaha heysato waa in ay ilaaliyaan, dhowraan isla markaana ku dadaalaan
si fiican u isticmaal: Ma fiicana in biyaha aad si qaldan u isticmaasho waayo, Biyo aad daadinayso qof ayaa biyo la’aan meel kale ugu dhimanaya.
Ha wasaqeyn: Dadka qaar waxa ay wasaq ku shubaan Wabiga iyo biyaha dadka cabaan taasi oo cuduro soo jiidi karta, sidaa darteed ku dadaal nadaafadda.
Ha ku Xadgubin: Waxaa jiro dad sameyta biyo xireeno ama meelaha qaar biyaha xoog lu leexsada si ay beerahooda u waraabsadaan taasi oo dhibaato ay kala kulmaan dadka qaar.
Ilaha in la Badiyo: Waxaa jirto beelo ku dagaalaya hal ceel, waxaa haboon in lacagta lagu bixiyo hubka, saanadda, cuntada ciidamada iyo dib u heshiinta iyo shirarka lagu qado ceelal kale.